7 sawir-qaade oo caan ah oo ay tahay inaad ogaato | Hal-abuurka khadka tooska ah
Maryan Rose | | Fanaaniin
Raadinta tixraacyada muuqaalku waa hanti soo noqnoqota oo ah isha waxyiga u dhexeeya fanaaniinta, naqshadeeyayaasha iyo sawir-qaadayaasha. Waa hagaag, waa mid ka mid ah tallaabooyinka ugu muhiimsan marka la abuurayo qaabka naqshadeynta ama mid kale. Waxaa laga yaabaa inaadan aqoon badan u lahayn goobta sawir-qaadista, waana sababta aan maanta kuugu soo qaadaneyno taxane sawir-qaadayaal caan ah.
Wax yar ayaan kaaga sheekayn doonaa noloshiisa iyo qaabkiisa. Ya en la dhabta ahtay, waxaad tahay ilUstradoras caanka ah waxay ku guuleysteen inay noqdaan tixraac adduunka oo dhan.Hadda shaqadooda waa la aqoonsan yahay oo la wada aqbalay, mid kasta oo iyaga ka mid ah wuxuu leeyahay qaab gaar ah.
1 7 sawir-qaadayaal dumar ah oo caan ah
1.7 Qoraa qumbaha
7 sawir-qaadayaal dumar ah oo caan ah
Hoos waxaan kaaga sheegaynaa 7 sawir-qaade oo caan ah, kuwaas oo la abaalmariyay intii ay ku jireen xirfaddooda xirfadeed oo ay la kaashadeen machadyo badan oo caan ka ah adduunka oo dhan.
Xigasho: Paula Bonet
Paula Bonet waa a Sawir-qaade Valencian, sawir-qaade iyo qoraa, waxa uu dhashay December 10, 1980. Hadda waxa uu ku nool yahay Barcelona. Waxay ka qalin jabisay Farshaxanka Fine ee Jaamacadda Polytechnic ee Valencia, waxayna ku takhasustay rinjiyeynta iyo qorista. 2002dii waxa uu helay deeq waxbarasho oo Promoe ah, kaas oo uu waxbarashadiisa ku dhammaystay Jaamacadda Katooliga ee Santiago de Chile. 2006 waxa uu helay deeq waxbarasho oo kale, taas oo uu u guuray New York si uu wax uga barto NYU.
Bilowgii xirfadiisa waxa uu go'aansaday in uu xooga saaro rinjiyeynta iyo xaradhka saliidda. Laakiin 2009 ayuu go’aansaday U fiirso xirfaddaada tusaale ahaan. Laga bilaabo sanadkaas, wuxuu hagaajiyay farsamadiisa rinjiyeynta saliidda iyo xaradhka. 2018 wuxuu helay Biladda Sharafta Dhaqanka (Farqiga sare ee Generalitat Valenciana). Waxa uu leeyahay iska kaashaday wargeysyada sida El Pais, Xusuus-qor Ara y eldiario.es.
Luci Gutierrez waa a Sawir qaade Catalan, caalamka oo dhan laga yaqaan. Waxa uu ku dhashay Barcelona 1977. Isaga style waa la safeeyey oo kaftan ah, waxay tix-raac ka dhigtaa xidhiidhka jacaylka, sasabasha iyo hab-dhaqanka aadanaha. Farshaxankiisu waxa kale oo uu ka hirgalay buugaag, animations iyo ololayaasha xayaysiinta, warbaahinta kala duwan iyo wadamo kala duwan. Waxa uu u soo shaqeeyay wargeysyada sida The New Yorker, The New York Times, Washington Post iyo The Wall Street Journal.
Shaqooyinkiisa ugu caansan waxaan ka heleynaa "Ingiriisi ma fududa", "Miss Galassia" ama "La valigia delle carabattole".
Xigasho: Eva Vazquez
Eva Vazquez waa a sawir qaade ka socda Madrid. Waxay baratay qaab-dhismeedka iyo animation-ka waxayna markii hore u muuqatay inay leedahay waddooyin kala duwan, laakiin ugu dambeyntii way isu yimaadeen oo waxay u horseedeen adduun ay ku jiraan taxane firfircoon iyo soo saarista asalka filimada. Buundada xooggani waa in uu sawiri karo dhammaan dhismayaasha uu qiyaasi karo, laga bilaabo kuwa ugu macquulsan ilaa kuwa ugu fantastik ah.
Sidaa darteed, waxay noqotay mid ka mid ah sawir-qaadayaasha ugu muhiimsan iyo kuwa gaarka ah ee ku xiran adduunka daabacaadda ee dalkeena. Shaqadiisu waxay diiradda saartaa khiyaaliga iyo sawir-qaadista, kuwaas oo jimicsi maskaxeed lagu qeexay fikrado isku dhafan oo loo qaabeeyey sida ay u qeexan yihiin qaab ahaan. Hadda waxa uu u heellan yahay in uu ku sawiro wargeysyada, buugaagta, majaladaha xirfadlayaasha ah, iwm.
Sara Fanelli (dhashay 1969) waa a Farshaxan iyo sawir-qaade Ingiriis oo u dhashay Talyaaniga, oo caan ku ah buugaagta sawirada ee carruurta. Wuxuu ku dhashay kuna barbaaray Talyaaniga, Florence. Wuxuu wax ku bartay Liceo Classico Michelangelo. Ka dib waxa uu u guuri jiray London si uu u barto naqshadaynta iyo sawirka. Waxay ahayd sannadkii ugu dambeeyay ee Kuliyadda Farshaxanka ee Royal in Sara ay ogaatay adduunka sawirka carruurta. Buugaagtiisa ugu caansan waxaa ka mid ahaa Button. kaas oo uu ku helay Abaalmarinta Macmillan ee Sawirka Buugga Sawirka Carruurta. Wixii markaas ka dambeeyay sawir-qaadaha British-ka ah waxa uu daabacay ku dhawaad ​​20 buug.
Marka laga hadlayo qaabkeeda iyo farsamadeeda, Sara waxay isticmaashaa isku-dhafka iyo isku-dar aad u taxaddar leh oo qalab iyo xarfo ah. Waxa uu la shaqeeyay warbaahinta muhiimka ah sida New York Times, New Yorker, iyo kuwa kale sida Pinguin, Faber iyo Faber, Tate Britain, Tate Modern ama Matxafka Victoria iyo Albert.
Ana Juan (1961, Valencia) es una de las inta badan sawir-qaadayaasha Isbaanishka ee caalamiga ah ee la aqoonsan yahay. Su tahay ha sido dadweynahabuuqaysaan en revists como El Pawaa, El afkao, Qaranka Juquraafi safarkaer, Elle, Mary cad, The New Yorkers, Time, Dadka o Newsweek. Waxa kale oo uu la kaashaday majaladaha sida La Luna de Madrid iyo Madrid, oo siinaya iyaga kaliya majaajilada ilaa maanta, oo dhan madow iyo caddaan iyo midab muujin.
Ana Juan ha sido una de las Hormoodka suugaanta carruurta ee Catalan, oo leh in ka badan soddon cinwaan oo lagu daabacay luqaddaas. Ha obtobantagay nambarosos premiummacruufka como ilustradora e ikhtiraacidadora, ENTre otros helay pAbaalmarinta Qaranka ee Sawirka, Wasaaradda Dhaqanka ee Isbaanishka ee 2010.
Xigasho: Paula Troxler
Paula Taarxs es una sawir-qaade iyo naqshadeeye garaafeed oo ka yimid Willisau (Switzerland), waxa uu dhashay 1981kii. En Shaqadiisu waxay muujisaa midabada iyo sawirada carruurta iyo kuwa dhallaanka ah. Su trabtoonta se ha EXPuwaao en kala duwanas EXPosfikraddaaad bay ugu jirtaa Suiza sida ku jirta dheerordayjcilad. Waxa uu wax ku bartay isgaadhsiinta aragga ee Jaamacadda Sayniska ee lagu dabaqay farshaxanka iyo naqshadaynta, halkaas oo uu ku dambayn doono ku takhasusay sawirka. Sannadkii 2006 waxay go'aansatay inay istuudiyo u gaar ah ka samaysato Berlin, halkaas oo ay ka bilaabi doonto shaqadeeda sawir-qaade madax-bannaan. Ugu dambeyntii 2008, wuxuu go'aansan lahaa inuu u guuro Zürich, halkaas oo uu hadda ku nool yahay oo uu ka shaqeeyo.
Es sawir qaade iyo fanaan caag ah. Waxa uu ku dhashay Quintanar del Rey (Cuenca). Markii ay jirtay 14 sano oo keliya, sawir-qaadahani waxay ogaatay inay doonayso inay barato Farshaxanka Fine. Waxa uu ka qalin jabiyay Fine Arts, laakiin in muddo ah waxa uu go'aansaday in uu diiradda saaro sawir-qaadista. Ilaa ugu dambeyntii, wuxuu go'aansaday inuu naftiisa u huro si buuxda u sawirida iyo sawirista. Dhiirigelintiisa waxaa lagu bixiyaa welwelkiisa, fekerkiisa iyo fikradihiisa. Waxay ka hadlaysaa mawduucyada sida jacaylka, isbeddelka cimilada, anaaninimada ama rajada. La shaqee summadaha iyo daabacayaasha sida Grijalbo, Casio ama Glamour Spain.
Haddii aad u malaynayso in maqaalkani uu ku yaqaanay wax yar. Halkan Waxaan kaaga tagayaa liis kale oo sawir-qaadayaasha Isbaanishka ah, oo laga yaabo inaadan garanayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » sawir-qaadayaasha caanka ah
Waa maxay Corel Draw